JIALI Razor ao amin'ny Amsterdam “World of Private Label” amin'ny Internet
Manomboka amin'ny 1 Des hatramin'ny 2rd Dec, 2020, JIALI Razor dia manatrika ao amin'ny Amsterdam Online "World of Private Label" Jiali razor no mpanamboatra hareza voalohany ao Shina ary manana mpiasa 300 mahery ary manome ny hareza amin'ireo firenena 70 mahery. Ny vokatra ao anatin'izany ny tokan-tena / kambana / telo / efatra / dimy / enina ...
Ireo hareza mba hanaratra sy hanaratra
tsy misy valiny marina, Rehefa mandinika izay atao hoe hareza tsara indrindra dia miankina amin'ny safidinao manokana na ny volon'ny volo tarehy izany. Hanampy anao izahay hisafidy amin'ireo hareza isan-karazany. Misy karazana hareza 4 lehibe: mahitsy, fiarovana, hareza amin'ny tanana ary herinaratra. Ka - iza no tsara kokoa. yo ...
Fa maninona no manaratra?
Amin'ny andavanandrom-piainan'ny lehilahy, mazàna misy fomba roa hanaratsiana hanalana ny volo amin'ny tarehy. Ny iray dia ny fanaratsiana mando nentim-paharazana, ny hafa kosa aharatra. Inona no tombony azo amin'ny fiharatana mando amin'ny fiharatana elektrika? Ary inona no maharatsy an'io fiharatana mando io na antsointsika hoe fanaratra tanana. L ...
Raha heverinao fa ady maoderina ny tolon'ny lehilahy manala ny volo tarehy dia misy vaovao ho anao. Misy porofo arkeolojika fa, tamin'ny vanim-potoana farany vato dia nanaratra volon'ondry, obsidian, na clamshell ny lehilahy, na koa clamshells nampiasainy toy ny tweezers. (Ouch.) Taty aoriana, nanandrana tamin'ny alimo ny lehilahy, polisy ...
Ho an'ny fiharatana farany sy tsara, araho fotsiny ireo dingana vitsivitsy tena ilaina. Dingana 1: Sasao ny savony sy ny rano mafana hanala menaka amin'ny volonao sy ny hoditrao ary hanomboka ny fanalefahana ny whisky (mbola tsara kokoa, aharatra aorian'ny fandroana, rehefa voky tanteraka ny volonao). Dingana 2: ny volo malemy tarehy dia ...
INFO AN'NY karazana fonosana RAZOR ao amin'ny tsena lehibe
Ny vokatra fikarakarana manokana dia laniana isan'andro ary hareza satria FMCG dia karazany iray ihany amin'izy ireo, ny QTY an'ny mpanjifa dia goavambe satria iray amin'ireo lahatsoratra ilaina amin'ny fampiasana isan'andro ary ny fonosana samihafa dia amin'ny fivarotana amin'ny tsena lehibe toa an'i Amerika atsimo, Amerika Avaratra, Eoropa ary Moyen Orient, F ...
Ahoana no hikarakarana ny hareza azo ampiasaina
Ny hareza tsara ary ny hareza volom-borona antonony dia afaka mamita ny fiharatana, fa ny hareza kalitao antonony dia mandany fotoana bebe kokoa, tsy madio ny fampisehoana fa maharary. Ny kely tsy fitandremana amin'ny fandehanan-drà, ny matotra ary vaky ny tavanao, miaraka amin'ny lelany ratsy. Niharatra ny lehilahy t ...
Maninona ny olona no tia hareza?
apetaho ny crème de chaveur, raiso ny hareza dia manaratra. Mahafinaritra sy miadana, Andro mahafinaritra sy mahafinaritra eritrereto eto. Ny olona sasany dia mety hisalasala ny amin'ny antony mbola ampiasain'ny lehilahy hareza azo esorina na dia be dia be aza ny fanaratsiana herinaratra. Mazava ho azy fa toy ny hareza azo ampiasaina ny olona, ​​Andao hiresaka ny antony? ...
Hareza izay vita tamin'ny akora vita amin'ny volotsangana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-18
Nandritra ny 30 taona mahery nisian'ny tantara, Ningbo jiali dia nanandrana nanangana vokatra maro momba ny tontolo iainana izay mandray anjara amin'ny fampihenana ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Miaraka amin'ny fanoloran-tena matanjaka amin'ny fikarakarana ny olan'ny tontolo iainana ateraky ny fako isan'andro, orinasa maro no namolavola tontolo iainana-fr ...
Ahoana ny fomba hisafidianana hareza azo ampiasaina?
Misy karazana hareza eny an-tsena, hareza tokana ka hatramin'ny hareza enina, hareza mahazatra hamoha ny hareza. Ahoana no ahafahantsika misafidy hareza mety ho an'ny tenantsika? A, Fantaro ny volombavanao a. Volombava volo na volo kely kokoa amin'ny vatana. —– Misafidiana hareza 1 na 2 b. Volombava malefaka sy maro kokoa ...
Expo momba ny fanasan-damba sy fikarakarana iraisam-pirenena any Shanghai 2020
Ny foara ivelan'ny besinimaro voalohany natrehinay dia notontosaina tany Shanghai tamin'ny 7 - 9 Aogositra hatramin'ny COVID -19. Ny raharaham-barotra iraisam-pirenena dia miha-mitombo hatrany satria tsy misy mahalala izay hitranga amin'ny ho avy, fa ny mpanjifa sasany kosa dia mihevitra azy ho toy ny vintana. Ka miaraka amin'ny foara ho an'ny busine io ...